Nahoana no misafidy ny fonosana SIUMAI?
1. SIUMAI dia manana ny orinasany manokana, izay naorina tamin'ny taona 2002 ary nikaroka tao amin'ny indostrian'ny fanontam-pirinty sy ny fonosana nandritra ny 20 taona.Afaka manome ny vokatra tsara indrindra sy ny vidiny tonga lafatra.Ny fifandraisana mivantana ao amin'ny orinasa dia afaka miantoka fa ny fanehoana rehetra no mahomby indrindra.
2. Ny fomba famonosana dia natao malalaka, tsy misy habe, karazana boaty ary famerana ara-nofo.Manome serivisy OEM, ODM rehetra.
3. Ny hafainganam-pandeha haingana, santionany nomerika, santionan'ny milina, santionany mialoha ny famokarana, sns.Mba hahazoana antoka fa ny antsipiriany rehetra dia azo ampitaina sy voamarina amin'ny mpanjifa.
4. Ny fanomezan-toky ny kalitao, ny fanaraha-maso ny kalitao henjana, ny vokatra misy kilema dia tsy hatolotra ny mpanjifa.Raha misy olana amin'ny famokarana, ny fanaraha-maso ny kalitao dia mety ho ny fotoana voalohany hahitana izany.Aoka ho tompon'andraikitra 100% amin'ny mpanjifa.
5. antoka fanaterana, mampanantena ny SIUMAI fa hanatitra ara-potoana.Manaraka ny fitsipiky ny asa avo lenta izahay.Aorian'ny fametrahana ny baiko ho an'ny famokarana, dia handamina ny famokarana entana amin'ny hafainganam-pandeha ara-tsiansa indrindra izahay.
6. Ny serivisy aorian'ny varotra tonga lafatra, SIUMAI dia manana rafitra serivisy aorian'ny varotra.Ny fanaraha-maso ny kalitao sy ny varotra dia hifikitra amin'ny toetran'ny serivisy matihanina indrindra amin'ny baiko rehetra, ary mifandray 24 * 7 ora.
Teknolojia mandroso, fanontam-pirinty maro loko, lamina feno sy fanamiana, tsara tarehy sy malala-tanana.Ny akora avo lenta dia madio, tsy misy poizina ary azo ampiasaina.Tohano ny customization ny santionany customization, orinasa fivarotana mivantana.
Ho an'ireo rakitra omen'ny mpanjifa, ho an'ny fanontanao mazava, dia asaina mampiasa endrika vector toy ny (AI, PDF, CDR).Raha tsy misy endrika rakitra toy izany, dia azonao atao koa ny manome rakitra JPG, TIF manana endrika avo lenta (300dpi).
Afaka manome ny eritreriny sy ny vokatra ho fonony ihany koa ny mpanjifa.Hanomana mpamorona matihanina izahay hanome anao ny famolavolana.Ary manome santionany nomerika ho fanondroan'ny mpanjifa.
teo aloha: Medical surgical saron-tava boaty saron-tava fitehirizana boaty saron-tava